Awuvumi ukuphuma otakwini uMasipala iMandeni – Bayede News
Awuvumi ukuphuma otakwini uMasipala iMandeni
Muva nje sekuqubuke ukukhuluma okuthi uMnu uThabani Mdlalose osanda kuqokelwa esikhundleni sobumeya ngoMandulo nyakenye naye usenza okufanayo nalokhu okwabe kukhonjwa kuZulu.
by nguMandla Zulu Posted on 12 January 2020 12 January 2020
Emuva kwezinguquko ezinqala kuMasipala iMandeni kulandela ukuhoshwa kwaloyo obeyiMeya uMnu uSiphesihle Zulu osetshalwe kuMasipala omkhulu iLembe, izinkulumo nezinsolo zenkohlakalo ziyaqhubeka nokuwunamathela.
Muva nje sekuqubuke ukukhuluma okuthi uMnu uThabani Mdlalose osanda kuqokelwa esikhundleni sobumeya ngoMandulo nyakenye naye usenza okufanayo nalokhu okwabe kukhonjwa kuZulu. Yena usolwa ngokusebenza kwenkampani yonogada iKhombindlela Security Services nokuthiwa usondelene nayo futhi ibingakaze ifake isicelo somsebenzi.
UNobhala wekomiti lomphakathi iMandeni Community Committee, uMnu uZibuse Makhoba ukuqinisekisile ukuthi bazwile ngezinsolo ezithinta iMeya uMdlalose zokuthi uphoqe ukuba kuqashwe kukleziswe inkampani yonogada iKhombindlela. Uthe lolo daba ngalezi zinsolo ezithinta iMeya uMdlalose bazedlulisele kuSomlomo woMkhandlu ukuba ziphenywe.
Ukukhuluma kuthi inkampani okuyiyona eqashwe yilo Masipala iPro Secure Pty Ltd. Bathi ibe isiphoqwa ukuthi iklezise iKhombindlela Security Services, negcine isingena ezindaweni eziyishumi eziyingxenye yezindawo ezisebenzayo naphezu kokuthi le nkampani ingafakanga sicelo somsebenzi.
IMandeni Community Committee lolu daba isilithathe yalubikela izinhlaka ezahlukene zikaHulumeni okubalwa noMphathiswa Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal uMnu uSipho Hlomuka.
IBAYEDE inayo ikhophi yencwadi ebhalelwe uMnu uHlomuka yikomiti lomphakathi waseMandeni abamcela kuyona ukuba ajube uphenyo oluzokwenaba ngezinsolo. Ingxenye yale ncwadi esayinwe umhla zingama-29 kuMandulo wezi-2019 ifundeka:
“Kunezinsolo zokuthi iMeya ihlele ngasese ukuba inkampani iKhombindlela Security Services ukuba isebenze ngaphansi kwenkampani iPro Secure Pty Ltd okuyiyona enikezwe ithenda yiMandeni Local Municipality. Kuphinde kuvele nokuthi ubudlelwano phakathi kweMeya uMdlalose noMqondisi wale nkampani kugqame kakhulu ngesikhathi ezogcotshwa njengoba wafika ngemoto yohlobo lweRange Rover Discovery okungeyenkampani iKhombindlela Security Services. Uma kungukuthi lezi zinsolo ngeMeya uMdlalose ziyiqiniso kuyobe kungukwephula umthetho olawula ukuphathwa kwezimali zikamasipala okuyiSigaba 117 no 118 soMthetho Wokuphathwa Kwezimali Zomasipala uNombolo 56 wezi-2003. OkunguMthetho oqondene nokuziphatha kwamakhansela okungumthetho ongaphansi kweSiqondiso 1 soMthetho Wezinhlelo Zomasipala uNombolo 32 wezi-2000. Ngakhoke sinxusa uSomlomo ukuba aziphenye lezi zinsolo ezibhekiswe kumeya ngokwamandla abekwe kuSomlomo.”
Ukuqinisekisa ukuthi umasipala nawo uyaziphendulela, iBAYEDE ithinte imeneja kaMasipala iMandeni, uMnu uSizwe Khuzwayo ukuqinisekisile ukuthi lukhona uphenyo olujutshwe nguMnyango Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal olumayelana nezinsolo okubalwa kuzona inkohlakalo nokungaphathi kahle izimali zomkhandlu ezibhekiswe kobengumeya walomasipala, uMnu uSiphesihle Zulu oseshintshelwe kuMasipala Wesifunda iLembe.
“Yebo lukhona uphenyo olunjalo kodwa angeke ngikwazi ukukunikeza imininingwane ngalo ngoba lolu wudaba olusingethwe nguMnyango waKwaCogta. Ngakho uma ufuna imininingwane kungcono uxhumane naboMnyango waKwaCogta ukuthola njengoba kuwudaba olungaphezulu kwethu,” kusho uMnu uKhuzwayo.
Odabe lokuthi neMeya, uMnu uThabani Mdlalose uyaphenywa ngodaba lwezinsolo zokuthi naye usethe efika waziqokela inkampani yonogada iKhombindlela Security Services ekubeni ibingafakanga sicelo somsebenzi, uMnu uKhuzwayo uthe ngokwakhe akanalo ulwazi ngokuphenywa kwemeya uMdlalose, nokuthi kunenkampani iKhombindlela esiqashwe nguMasipala ekubeni ingafakanga sicelo sombenzi.
“Ngokwazi kwami ikhona inkampani yonogada enikezwe umsebenzi kwaMasipala ngoba ibifake isicelo somsebenzi, kodwa ngeke ngilidalule igama layo. Bengingenalo ulwazi ngenkampani iKhombindlela Security Services ukuthi inikezwe umsebenzi. Odabeni lophenyo ngeMeya yethu bengizocela nakhona uxhumane nabakwaCogta,” kusho uMnu uKhuzwayo.
Imizamo yokuthola uMnu uMdlalose ukuba aphawule ngalezi zinsolo ezibhekiswe kuyena ayiphumelelanga ngenxa yokuthi ucingo lwakhe beluvaliwe. Kanjalo nemizamo yokuthola uMnu uSenzo Mkhwanazi oyisikhulu senkampani iKhombindlela Security Services nayo ibhuntshile ngenxa yokuthi ucingo lwakhe beluvaliwe.
Posted in Izindaba, S-three